ဘွတ်ကင်စနစ်အ bookingcom ဟိုတယ်များ - ဆန်းစစ်ခြင်း
News FeedTopics 872Photos 7Videos 1Participants2236
2 236 participants in the group
ဘွတ်ကင်စနစ်အ bookingcom ဟိုတယ်များ - ဆန်းစစ်ခြင်း ငါ Books မှတဆင့် booking သည့်အခါပိုက်ဆံကယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုအကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါအားလုံးခရီးသွားများအတွက်မဟုတ်, သာပါ! ငါ့နာမကိုကိတ်နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်း Genius ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအွန်လိုင်း booking များအတွက် 15% လျှော့စျေးရှိပါတယ်။ သူကဘာကင်ဟမ်မှာယူထားဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ယခုအခါအခန်းအများစုကိုသူ့အဘို့အခြားသူများထက်စျေးနှုန်းချိုသာလျစ်လျူရှု။ ယနေ့တွင်ငါဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်ဘွတ်ကင်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အခန်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘွတ်ကင်ကိုဘယ်လိုအကြောင်း။ တစ်ဦးက start for ကြောင့်ဘာကင်ဟမ်မှခညျြနှောငျဖို့, booking မတိုင်မီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့ (သင်ကလွယ်ကူ, လွယ်ကူစွာခဲ့ကြအရေးကြီးသည်) နှင့်စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ အမှု၌စကားဝှက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအတိအကျမှတ်မိနေမယ့် password ကိုမောင်းထုတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ ရုတ်တရက်သင်အရေးတကြီး (လေဆိပ်မှာ, ဟိုတယ်မှာ) သင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါစကားဝှက်ကိုမေ့လျော့သောကြောင့်, ငါစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ စကားဝှက်ကို Restore အထူးသဖြင့်အားနည်းအင်တာနက်လျှင်အလွန်ကျခံထားသည်။ ငါဆွဲယူတဲ့ application ကိုဘွတ်ကင်ရှိပါတယ်ခရီးသွားသည့်အခါငါသည်လည်းအသက်တာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်ဖုန်းပေါ်မှာပေါ့။ ရှာဖွေရေးအကွက်ထဲမှာ logging ပြီးနောက်, ရှာရန်ခလုတ်ကိုအခန်းထဲမှာကလစ်နှိပ်ရာတွင်လူအရေအတွက်ကိုသင့်ရဲ့အနာဂတ်ခရီးသွားရက်စွဲများ၏အရပျကိုမောင်းထုတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ရေကူးကန်, ကန့်သတ်အခန်းတစ်ခန်းနှုန်းမှာ (ဥပမာ, တစ်ညကို 50 dollorov အထိပြသပါ), ကြယ်ဧည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအရေအတွက်ရေကူး, နံနက်စာများအတွက်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ့်ကိုအောက်တွင်ဆိုပါက, ငါသည်အသေချာဘို့ကမကြိုက်ဘူး, ထိုဧည့်သည်ပြန်လည်သုံးသပ် 7.0 ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ဧည့်သည်များရေးကြည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဤဟိုတယ်များအတွက် ratings အတည်ပြုထားတဲ့၏အခြေခံပေါ်မှာမှတ်ချက်များ၏နံပါတ်ရှိသည်။ reviews 50-100 ပိုတွေအများကြီးနှင့် 7.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတစ်ဦးခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်သည်။ နံပါတ်မရွေးအခါသူ၏ဘဏ်ကဒ်၏နံပါတ်မောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျစာအုပ်ဆိုင်တ၏အမည်အဖြစ် data တွေကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဟိုတယ်များအတွက်အခန်းပေါင်းစာအုပ်ဆိုင်မှပိုက်ဆံကန့်သတ်မှကန့်သတ်သည်အဘယ်မှာရှိကတ်များသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ သငျသညျအတိအကျကြိုတင်စာရင်းများအတွက်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်အခမဲ့မြေပုံများ, ရှိပါတယ်။ သငျသညျသာယာတဲ့ဖွစျလိမျ့မညျအဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်သောအခါ, အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ရေပူထဲမှာအိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သတိပြုပါ။ သံသယကြောင့်အခြား option ကိုရွေးချယ်ဖို့ပိုကောင်းသည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်တဘုံရေချိုးခန်းနှင့်အခန်းပြင်ပမှာဖြစ်ဖို့ထွက်လှည့်အရာ, တစ်ချိန်ကရှိခဲ့ပေမယ့်စျေးနှုန်းအခန်းအတွက်အလွန်လျောက်ပတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းဟိုတယ်တွင်နံနက်စာရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ နံနက်စာရှိသည်ဖို့နံနက်ယံ၌ရှာရန်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဖီးကြောင့်ငါ့ကိုမှဟိုတယ်မှာမနက်စာထက်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအလားအလာကိုပုံရသည်။ အားလုံးပိုမိုအကြောင်းပြချက်, သည်, လမ်းပေါ်မှာ, စားသောက်ဆိုင်၌, အခန်းနှုန်းမှာနံနက်စာတွင်ထည့်သွင်းနှိုင်းယှဉ်အလွန်စျေးကြီးတတ်၏။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုအပ်အခန်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။ အဆိုပါအစောပိုင်းကစာအုပ်, ပိုကောင်းသင်နံပါတ်ရရှိပါမည်။ အလျင်အမြန်ဖျက်သိမ်းဖို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံး။ သင်ဆဲနှောင်းပိုင်းကဖြစ်ကြပြီးလူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းသောအမှုအရာမှထွက်ခွဲထားခဲ့သည်လျှင်, ငါ agoda နှင့် Airbnb ကိုကြည့်ရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ သငျသညျမှတ်ပုံတင်နှင့်လင့်ခ်မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်မထားလျှင် Airbnb တွင်, RUR 2100 ၏လျှော့စျေးရှိရလိမ့်မည်။ သငျသညျကံကောင်းဖြစ်ကြပြီးဘွတ်ကင် booking ပြီးနောက်မေးလ်တစ်ဦးကအခန်းဘွတ်ကင်လျှင်ဘွတ်ကင်၏အတည်ပြုချက်ကိုလာပါတယ်။ ဤစာအုပ်သည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်, ပုံနှိပ်ချွတ်အကြံပြုသည် မကြာခဏပင်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်များတွင်ကြိုတင်မှာယူမှုအရေအတွက်သည်နှင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမြဲတမ်းကြိုတင်မှာကြားထားကိုရှာဖွေနိုင်မဟုတျပါလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲပစ်လျှင်စိတ်ပူရန်မလိုပါအခမဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူအခန်းတခန်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလေဆိပ်မှာအပေါ်ဆိုက်ရောက်ဟိုတယ်တွင်ကြိုတင်စာရင်းပြသနိုင်ဖို့ကိုမေးမြန်းစေခြင်းငှါသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ထိုအခါလေယာဉ်သည်ရွှေ့ပြောင်းကဒ်ဖြည့်ဆည်းကျနော်တို့ဟိုတယ်အမည်နှင့်လိပ်စာရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်။ ဟိုတယ်တွင်ရောက်ရှိတွင်သင်သည်တစ်ကြိမ်မှာသို့မဟုတ်ငွေပေးချေပြီးနောက်အတည်ပြီးသားပေးဆောင်အခန်းပေါ်သို့မဟုတ်မမူတည်။ ရှားပါးကိစ္စများတွင်ငွေပေးချေသည့်နှင်ထုတ်ခြင်းပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတောင်း, ရှိသမျှလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများထားပါ။ အငြင်းပွားမှုများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သူတို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အများအပြားဟိုတယ်များတွင်ကုန်ပစ္စည်းအချိန်မရောက်မှီအရှည်လျားရရှိမှုမှဘာသာရပ်အခြေချရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်တရုတ်, အဲဒီမှာနေထိုင်, ဒါပေမယ့်ငွေပေးချေမှု + 1night လိုအပ်အခြေချရန်, သတိရှိစေသတည်း။ ထို့အပြင်ပြောင်းရွှေ့အပေါ် booking အခါအရေအတွက်ဓာတ်ပုံများအတွက်နဲ့တူခဲ့လိုအပ်သည်။ တခါတရံမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်ကွဲပြားခြားနားသောလှည့်ကွက်သွားပါ။ အများကြီးစျေးသက်သာခြင်းနှင့်သင်အခပေးထက်ပိုဆိုးနေတဲ့အခန်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျမေးခွန်းများရှိပါကသင်အမြဲ e-mail, tool ကိုအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်အထူးကုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကိုရေးသားဖို့တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ အငြင်းပွားမှုအခြေအနေကိုဖြစ်ပွားမှု၏ 90% အတွက်ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။ အာရှမှတဆင့်ခရီးသွားလာငါဘွတ်ကင်ပေါ်ကအခန်းခနှုန်းထားများကျနော်တို့ကိုမေးမြန်းသည့်အခါကျနော်တို့ဟိုတယ်မှာပြောကြားခဲ့ကြသည်သောစျေးနှုန်းများထက်အများကြီးစျေးသက်သာကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်ရုံထဲမှာလာနှင့်တစ်ဦးအခန်းကိုမေးလျှင်, များအတွက်စျေးနှုန်းအွန်လိုင်း booking ထက်ပိုမိုမြင့်မားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ငါ "ပွဲချင်းပြီး" Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်, သင်၏အခန်းကစာအုပ်ဆိုင်မှအကြံပြုသည်။ ငါသည်သင်တို့အားလုံးကောင်းတစ်ဦးအားလပ်ရက်အလိုရှိ၏။
Whether you’re looking for hotels, homes, or vacation rentals, you’ll always find the guaranteed best price. Browse our 2,518,364 accommodations in over 85,000 destinations.